Akụkọ - Usoro Ọhụrụ maka akwụkwọ BOOX Nova
Ọhụrụ Design ikpe maka akwụkwọ BOOX Nova agụ
New ikpe maka BOOX nova 3 agba ereader
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ ịgụ ebook na ereader. Ọ dị mma ịgụ ọtụtụ akwụkwọ na agụ ahụ ebughibu. Enweghị nchekasị iburu akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị arọ, nke na-ewe ohere na ego. Ugbu a, BOOX ereader bụ otu n'ime ndị na-agụkarị ọkacha mmasị. Ọ bụrụ ezigbo enyi gị maka ọrụ na ọmụmụ ihe.
Nke a bụ usoro ọhụụ ọhụrụ anyị maka onye na-agụ ihe nwere ọtụtụ ọrụ.
Will ga-ahụ ya n'anya.
Nke a ikpe agwakọta aka eriri, pensụl njide na guzoro igba, esetịpụ gị ereader guzo stably. Hapụ aka gị mgbe ị na-agụ ihe, ma drinkụọ kọfị. Onye pensụl pensụl na-ejide mkpịsị odee gị mgbe ị naghị eji ya.
Nkecha imewe na họrọ adịchaghị Pu akpụkpọ anụ ikpe nwere ezigbo aka mmetụta. Ọ na-adịgide adịgide iji mee ihe, chebe onye na-ege gị ntị ruo ogologo oge. Microfiber n'ime ya na-enweghị nchacha, kwekọrọ na agba ojii.
Ikpe ahụ na-akwado ụra akpaaka na edemede ọrụ. Mgbe ị mechiri mkpuchi gị, ihe na-agụ gị ga-emechi.
Mgbe ị mepere mkpuchi gị, onye na-agụ ihe gị ga-emepe na-akpaghị aka. Mgbe ị na-eme ngwa ngwa ịpụ, na-arahụ ụra, ọ dị mfe ịkwụsị ịgụ gị.
Iji eriri aka na-agbanwe, ikpe ahụ na-enye gị ohere ijide ya n'aka otu aka. Nwere ike ịlele ya n'aka, dị mfe ịga ebe ọ bụla. Ihe ọ bụla gị na nwa gị, ọ nwere ike ijide n'aka gị otu.
Ikpe akpaaka na-emechi. Echegbula onwe gị banyere ọkọ ahụ site na igodo gị na ihe ndị ọzọ dị nkọ. Ọ na-emekwa ka onye na-agụ ihe gị dị ọcha ruo ụbọchị ole na ole.
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ n'ụzọ zuru oke na ereader gị dị oke ọnụ, na-echebe n'ụzọ zuru oke.
Debe onye na-ege gị ntị ka ọ ghara ịdaba na ujo.
Ọ ga-abụ ezigbo onye na-ege gị ntị.
N'ezie, anyị nwere ụdị ejiji ndị ọzọ maka onye na-agụ ihe. Dị ka ebughibu na fechaa ikpe, silk e biri ebi na agba ikpe.
Na origami iguzo ikpe.
Have nwere ọtụtụ nhọrọ maka onye na-agụ gị.
Kedu nke kachasị amasị gị?